Activities | TMH Telecom Public (Myanmar)
The first listed telecom company, The first IPO company in Myanmar.
အနာဂတ်ပတ်ဝန်းကျင်လှပဖို့ TMH နဲ့အတူ သစ်ပင်စိုက်ကြစို့ (June )
၁၉.၆.၂၀၁၉ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ပန်းပျိုးလက်ဆရာတော်တို့ ဦးဆောင်ကျင်းပသော သစ်ပင်စိုက်ပွဲတော်သို့ ကုသိုလ်ပြုဖက်ဖြစ်သော မြတ်နိဗ္ဗာန်သစ်ပင်စိုက်ပျိုးလှူဒါန်းရေးအဖွဲ့အပါအ၀င် တစ်ခြားသော အဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းကာ TMH Telecom Public Company Limited မှ ၀န်ထမ်းများလည်းသွားရောက် အင်အားဖြည့်ပြီး
အနာဂတ်ပတ်ဝန်းကျင်လှပဖို့ TMH နဲ့အတူ သစ်ပင်စိုက်ကြစို့
၂.၆.၂၀၁၉ (တနင်္ဂနွေ)နေ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ အမြန်လမ်း ၇မိုင် ၆ဖာလုံ အနီးရှိ ဓမ္မဝိနယစင်တာ (ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီးကျောင်း) ဝင်းအတွင်းတွင် ကုသိုလ်ပြုဖက်ဖြစ်သော မြတ်နိဗ္ဗာန်သစ်ပင်စိုက်ပျိုးလှူဒါန်းရေးအဖွဲ့အပါအ၀င် တစ်ခြားသော အဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းကာ TMH Telecom Public Company
ရန်ကုန်မြို့ကြီး သန့်ရှင်းဖို့ အားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်စို့
TMH Telecom မှ ၀န်ထမ်းများသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ ၅ ရက်နေ့တွင် အခြားအဖွဲ့အစည်းမျာနှင့်အတူပူးပေါင်းပြီး Clean Yangon Challenge ထောက်ကြန့်ဈေး နောက်ရေမြောင်းရှင်းလင်းရေးတွင်
TMH Telecom Public Co. Ltd. ၏ IPO Roadshow Seminar
ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင် ပဉ္စမမြောက် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီဖြစ်လာမည့် TMH Telecom Public Co. Ltd ၏Initial Public Offering (IPO) ကနဦးအစုရှယ်ယာများကမ်းလှမ်းခြင်းဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမိတ်ဆက်ပွဲ နှင့် ကနဦးအစု ရှယ်ယာများရောင်းချခြင်းကိုအောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်းကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် မန္တလေးမြို့ နှင့် အနီးတ၀ိုက်ရှိ လူကြီးမင်းများအား
Announcement for updating supplementary document
Now we would like to update the supplementary document. Pursuant to the Securities and Exchange Rule 117. (a), we hereby
ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင် ပဉ္စမမြောက် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီဖြစ်လာမည့် TMH Telecom Public Co. Ltd ၏ ကနဦးအစုရှယ်ယာများရောင်းချမည့် အစီအစဉ်အား ကြေငြာခြင်း
TMH Telecom Public Co. Ltd ၏ သာမန်အစုရှယ်ယာ (Ordinary Shares) အသစ်များအား အများပြည်သူသို့ ကမ်းလှမ်းရောင်းချခြင်း (Initial Public Offering)ပြုလုပ်ရန်အတွက် (Road Show)ကို ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း(YSX)တွင် (၁၃.၁၂.၂၀၁၇) နှင့်
Announcement for approving our company in Yangon Stock Exchange (YSX)
Today, We would like to announce gratefully to all. Our company is approved in Yangon Stock Exchange (YSX). Please can
No (54), Eastern Business Center, Level (5), Lay Daung Kan Road, Bo Kan Nyunt Quarter, Thingangyun Township, Yangon, Myanmar.
(+95 1) 8550348, 8550936, 573232
Monday - Friday (9:00 – 17:30)
© 2016-2019 TMH Telecom Public Co., Ltd. All rights reserved. Web Design by NetScriper